Amadivayisi we-Ultrasonic Yezimboni - I-Hielscher Ultrasound Technology
Amadivayisi we-Hielscher ezimboni ze-ultrasonic anamandla, asebenzayo futhi athembekile. Zakhelwe ukusebenza ngokuqhubekayo ngomthwalo omkhulu ezindaweni zezimboni. Ngama-kilowatts afika ku-16 ngedivayisi ngayinye, i-Hielscher ingumhlinzeki ohola phambili we-ultrasonics wezinqubo zamanzi ezimboni.
Ukusebenza kwe-Ultrasonic liquid ezingeni lezimboni kudinga imishini ye-industrial ultrasonic, ngoba isidingo samandla sikhuphuka nevolumu noma ukugeleza okuzocutshungulwa. Amadivayisi we-Ultrasonic laboratory akwanele ngezinqubo ezinkulu zokukhiqiza. I-Hielscher ingumhlinzeki ohola phambili we-ultrasonics wezinhlelo zokusebenza zokucubungula uketshezi lwezimboni, njengokuhlakazeka, ukugaywa kwezingulube ngopende noma uyinki, ukwakheka kwezingubo zokusebenza okuphezulu ngama-nanomaterial, ukukhiqizwa kwe-biodiesel, noma ukufakwa kokudla noma iziphuzo.
Isilinganiso sokugeleza [m³ / hr]
I-UIP1000hdT 1.0 20 0.0 – 0.5
I-UIP2000hdT 2.0 20 0.0 – 1.0
I-UIP4000hdT 4.0 20 0.5 – 2.0
I-UIP10000 10.0 18 1.0 – 10.0
Yakhelwe isicelo seZimabhizinisi
Izidingo zemishini ziyashintsha, lapho uthatha izinqubo kusuka ebhodini locwaningo ziye ezingeni lokukhiqiza. Amanani wokucubungula ayenyuka; izindleko zokucubungula zibalulekile; ikhwalithi yokucubungula iba ilitshe eliyisihluthulelo. Ezinye izinto, njengokuthembakala kwemishini noma ukusebenza kahle kwamandla nazo zingabalulekile.
I-Hielscher inikeza ububanzi bezinqubo ze-ultrasonic eziklanyelwe ngqo izicelo zezimboni zokucubungula amanzi.
I-UIP16000 (16 kilowatts)
i-homogenizer yezimboni enamandla
Amandla avelele nokusebenza kahle
Amandla wokukhipha we-Ultrasonic kuyisici esibalulekile senqubo yokukhulisa. Ukuze ucubungule amavolumu amakhulu kunani lesikhathi esinikeziwe, udinga ukusebenzisa amandla amaningi. I-Hielscher ingumhlinzeki kaNdunankulu emhlabeni wonke wamadivayisi we-ultrasonic anamandla amakhulu. Amandla we-ultrasonic ngedivayisi ngayinye avela kuma-watts angu-500 kuya kuma-kilowatts ayi-16. Kuzinhlelo zokusebenza ezijwayelekile zokucubungula uketshezi, amayunithi amane noma ngaphezulu ahlanganisiwe ngamaqoqo okweqiwa kabusha okwenziwe ngcono nokuzivumelanisa namandla. Isibonelo, iqoqo le-6xUIP10000 (60kW) lingasetshenziselwa ukucubungula ama-cubic metres afinyelela kuma-50 we-biodiesel ngehora.
Imishini ephezulu yezimboni isebenzisa ugesi omningi. Uma kubhekwa amanani entengo akhuphukayo, lokhu kuthinta izindleko zokucubungula. Ngalesi sizathu, kubalulekile, ukuthi okokusebenza kungalahli amandla amaningi ekuguqulweni kukagesi kukhiqizwe ngomshini. Amaprosesa we-Hielscher ultrasonic anokusebenza okuhle okuvelele okungaphezu kwama-85%. Lokhu kunciphisa izindleko zakho zikagesi futhi kukunikeze nokusebenza okuthe xaxa kokusebenza.
I-Industrial Grade yeNtsebenzo nokuthembeka
Ukuhlangabezana nezidingo zokucubungula izimboni kuthatha okungaphezu kwamandla kuphela. Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asezimboni akhiwe ngokusebenza okuqhubekayo ezindaweni ezifuna izinto. Njalo ingxenye eyodwa yama-processor ultrasonic yezimboni ze-Hielscher (uchungechunge lwe-UIP) yakhelwe futhi ihlolwe ukusebenza kesikhathi eside. Ezisekelweni zomhlaba jikelele, izinhlelo ze-Hielscher ultrasonic zibhekene nokufakwa kwangaphandle, umoya othulini, uketshezi olufuthiwe noma ukuphathwa okunamandla.